amagumbi - iivillas kufuphi neLake Saimaa kunye ne-spa - I-Airbnb
amagumbi - iivillas kufuphi neLake Saimaa kunye ne-spa
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguIlya
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uIlya iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Le ndlu iyingxenye yendlu e-semi-detached, inegumbi lokulala eli-1 kunye negumbi lokuhlala elidityaniswe nekhitshi, i-terrace enefenitshala yokuphumla. Ukutshaya kuvunyelwe kuphela kwi-terrace, ukutshaya akuvumelekanga endlwini. Ikhitshi inayo yonke into oyifunayo xa upheka - isitovu, i-oveni, imicrowave, iketile, itoaster, umenzi wekofu, ifriji, kunye neseti epheleleyo yezitya, umatshini wokuhlamba izitya. Zikhona iinkuni zokubasa eziko. Kukho isauna kunye newodrophu yokomisa iimpahla. Ungaziza nelinen yakho yokulala okanye uyirente.
Le ndlu iyingxenye yendlu e-semi-detached, inegumbi lokulala eli-1 kunye negumbi lokuhlala elidityaniswe nekhitshi, i-terrace enefenitshala yokuphumla. Ukutshaya kuvunyelwe kuphela kwi-terrace, ukutshaya endlwini akuvumelekanga. Ikhitshi inayo yonke into oyifunayo xa upheka - isitovu, i-oveni, imicrowave, iketile, itoaster, umenzi wekofu, kunye neseti epheleleyo yezitya, umatshini wokuhlamba izitya. Zikhona iinkuni zokubasa eziko. Kukho isauna kunye newodrophu yokomisa iimpahla. Ungathatha iilinen zakho okanye uthathe kuthi ukuba uzirente.
4.93 · Izimvo eziyi-69
Amagumbi abekwe ecaleni kweGeopark emangalisayo yaseImatra, ecaleni kwehotele yaseKylpyle spa Imatra. Kwihotele unokutyelela ipaki yamanzi, i-bowling, indawo yokutyela. I-complex ine-beach kunye ne-ski slopes ebusika. Kumgama wokuhamba kukho iindawo ezininzi ezixhotyisiweyo apho unokuba nebarbecue. Iintaka ezinomsindo ipaki yokwenza abantwana ikwimizuzu eli-10 ngemoto.
Amagumbi abekwe kufutshane ne-Geopark emangalisayo yase-Imatra, ecaleni kwe-Kylpyle spa Imatra. Kwihotele unokutyelela ipaki yamanzi, i-bowling, indawo yokutyela. Kwintsimi ye-complex kukho ulwandle, ngexesha lasebusika kukho i-ski runs. Kumgama wokuhamba kukho iindawo ezininzi ezixhotyisiweyo apho ungalungiselela i-barbecue. Kwimizuzu eyi-10 ngemoto kukho ipaki yeentaka ezinomsindo.
Umbuki zindwendwe ngu- Ilya
Ukuzihlola ngokwakho - iindwendwe zithatha izitshixo kwindawo ekhuselekileyo encinci